Aasaaska Aqoonta Caafimaadka | buug.ga
Tag Archives: Aasaaska Aqoonta Caafimaadka
Aasaaska Aqoonta Caafimaadka
10/07/2018 Dktr. Yuusuf Xirsi Axmed, Yuusuf Shaykh Cali SamantarAasaaska Aqoonta Caafimaadkamaamul
Jaalle Dr. Yuusuf Xirsi Axmed
Jaalle Yuusuf Sh. Cali Samantar
Buuggaan Aasaaska Aqoonta Caafimaadka oo daba jooga buuggii uu horay Guddiga Af-Soomaaligu soo saaray ee ku saabsanaa caafimaadka, wuxuu ifka u soo baxayaa goor uu afkeennii hooyo dhaqan galay, aadna u hanaqaaday.
Danta laga lahaa buuggaan qoristiisu waxay ahayd in dadweynaha Soomaaliyeed ee bartay Af-Soomaaliga qoriddiisa la siiyo wax caafimaadka ku saabsan oo ay akhristaan. Qorayaasha buuggu waxay fiiro gaar ah siinayeen in casharrada buuggu ahaadaan kuwo cilmi ku dhisan isla mar ahaantaasna garashadoodu qof walba u sahlanaan karto.
Waxaa aad loogu raja weyn yahay in buuggaani noqdo ku laga faa’idaysto gogoldhigna u noqdo buugaag kale oo noocaas ah soo bixiddooda.
Qorayaashu waxay mahad u jeedinayaan Guddiga Af Soomaaliga oo hoostiisa buuggaan lagu diyaariyey. Waxaa kale oo iyagana mahad loo celinayaa Iaalle Iikar Haddaad oo masawirrada buugga sameeyey iyo Iaalle Axmed Faarax Cali ”Idaajaa” oo gacan ka geystay casharrada qaarkood qoriddooda.
Jaalle Yuusuf Sh. Cali Samatar
Nadaafadda oogada iyo dharka
Waxaa lagu daabacay Wakaaladda Madbacadda Qaranka.
Oogada qofka gaashaankeedu waa haragga ku gadfan. Gaashaankaasi hawl weyn buu jirka u qabtaa. Haragga kore hawlihiisa waxaa ka mid ah:
Waa gaashaan oogadu kaga gabbato wixii dhibaya oo dhan ee dibadda uga imaanaya, sida: cudurka, jugta iyo wixii la mid ah.
Kulka iyo qabowga ayuu oogada u qiyaasaa.
Oogada ayuu quxrurka u kaydiyaa oo siiyaa markii nacfigu ku yaraado.
Markii dhididku oogada ka soo baxo, haragga sare dushiisa ayuu ku qallalaa. Waxyaalo gufar ah oo qofka jirkiisu soo nacay ayaa dhididkaasi dibadda u soo saaraa. Hadduusan gufarku oogada ka soo bixin waxyeello ayuu u geysanayaa caafimaadkeeda. Oogada aan la mayrin waxaa ku dhasha jeermi ciiddaas ka badan oo habaaska iyo wasakhda kale oo qofka korkiisa ku taalla ku dhex noolaada.
Markii wasakhdaasi oogada ku badato ilihii dhididku ka soo baxayey baa gufeysma. Markaas waxaa joogsada dhididkii iyo wixii kale oo aan oogaadu u baahnayn ee ay dibadda u soo tufi lahayd.
Nidaamkii kulka iyo qabowga oogada u qiyaasayey isaguna waa doorsooma. lHaraggii oogada gaashaanka u ahaa oo la rabay inuu cudurka iyo dhibaha kaleba ka celiyo ayaa markaas shaqadiisii gudan waaya oo ay suurowdaa isaga laftiisu jirro imaatinkeed sabab u noqdo. Si oogadu fayoobi u hesho waa in tallaabooyinka soo socda la qaado:
In haragga oogada gaashaanka u ahi hufnaado weligii, taasoo lagu gaari karo in qofku qubayska badsado. Meelo gooni ah oo oogada ka mid ihi waxay u baahan yihiin nadaafad dheeri ah, meelahaasoo ay ka mid yihiin: wajiga, afka, gacmaha, cagaha iyo labada ibood.
In dharka hoose oo ay ka mid yihiin funaanadda iyo candhasaabka la mayro, dhaqsana laysaga beddelo, maxaa yeelay dhididka iyo wixii kale oo jirku soo nacay baa dharka hoose ku dhega oo wasakheeya. Cayayaanka, injirtu ka mid tahay, ayaa dabadeedna halkaas ka dhalan kara oo oogada qofku cudur u keeni kara. Haddii sidaas qofku nadaafaddiisa u ilaaliyo inuu fayoobi ku noolaado bay u badan tahay.
Ka sheekee haraggu wuxuu oogada u taro iyo haddii ilaha dhididku xirmaan dhibka ka iman kara?
Marka uu qofku musqusha ka soo baxo;
Marka uu qofku rabo inuu cunnada cuno;
iyo marka uu cunnadaas idlaysto.
Goormay aad u habboon tahay in gacmaha layska mayro?
Maxaa dhici kara haddii gacmo aan la mayrin wax lagu cuno?
Cunnadu xagga diyaarinta meeqa qaybood bay u qaybsantaa?
Guud ahaan maxaa la doonayaa in cunnada laga ilaaliyo?
Cunnada dhigaalka ah maxaa loo baahanyahay in lagu sameeyo?
Harraadka runta ahi muxuu ka yimaadaa?
Maxaa saamayn kara qofka biyocabkiisa?
Maxaan la doonayn in biyaha la cabbayaa leeyihiin?
Maxaa la rabaa inay ka fogyihiin meelaha biyaha la cabbayo laga keenayo?
Gogosha lagu seexdo iyo dharka la huwado waa in la jafjafaa oo la qorraxeeyaa. Nadaafadda guriga waxaa kale oo ka mid ah inaan lagu daadin qudaarta diirkeeda iyo inaan lagu tufin calyada, iyo xaakada. Waxyaalahaas oo dhan waxaa ka dhasha jeermi halis ah, bilicda gurigana waa dilaan.
Wax ka sheeg siyaabaha loo ilaaliyo nadaafadda dhulka?
Maxay ka dhigan tahay nadaafadda dhulku?
Muxuu yahay jeermi?
Sidee baa loo arki karaa jeermiga?
Maxaa jeermiga kaalmeeya si uu qofka cudur ugu keeno?
Sheeg qaybaha cayayaanka xagga waxtarka iyo waxyeellada, adoo qayb walba wax ka magacaabaya?
Maxaa lagu tilmaamaa cayayaanka cudurrada keena?
In daawada sumaysa loogu dhaqmo.
Qashinka oo la uruuriyo oo la daboolo, lana gubo.
Xaakada iyo candhuufta oo aan dibedda lagu tufin.
Bannaannada oon lagu saxaroon.
Musqulaha oo la nadiifiyo, sunta cayayaanka dishana lagu shubo.
Dhammaan, wasakhda oo layska ilaaliyo.
Xaggee baa duqsigu ku tarmaa?
Maxaa duqsiga loogu sheegay inuu yahay gaadiid cudur?
Maxaa ka mid ah cudurrada duqsigu faafiyo?
Maxay tahay kaneecadu?
Sidee bay dadka wax u yeeshaa?
Maxaa Anofelesta dhaddigi duumada u keentaa kan labina uusan u keenin?
Xaakadu waa dhashuun doorsoomay oo ka soo go’a qofka xabadkiisa markii uu khaakhsado ama uu qufaco.
Haddii qofkaasi jirran yahay oo qabo hargab, qaaxo, qaarjeex iyo wixii la mid ah waxaa ku dheehan xaakadiisa jeermigii cudurka uu markaas qabo keenay.
Haddii ruuxa jirrani uu dhulka ku xaakoodo xaakadaasi wey engegi, jeermigii ku jirayna hawada ayuu la bidayaa, kolkaasaa dadkii fayoobaa neefsadaan oo cudurkii ka qaadayaan. Sidaas daraaddeed ayay reebban tahay in dhulka lagu xaakoodo ama lagu diifsado, siiba meelaha lagu kulmo, sida: guryaha hanuuninta, shineemooyinka, beeraha nasniinta, suuqyada, dugsiyada, isbitaallada iyo wixii la mid ah.
Qofkii xaakoonayaa ama diifsanaya waa inuu masar ama calal nadiif ah afka ku daboola si waxa ka soo go’ayaa ayan dibedda ugu dhicin oo markaas dad kale cudur ugu keenin.
Isbitaallada dadka bukaa jiifo, siiba kuwa qaaxada, waa reebban tahay in dibedda lagu xaakoodo. Halkaas qof waliba wuxuu leeyahay weel yar oo dabool leh oo uu ku xaakoodo, markii uu buuxiyana xaakada waxaa lagu daadiyaa meel loo sameeyey oo lagu gubo, weelkana waxaa lagu dhaqaa daawooyin loo washirey.
Xagga edebta laftigeeda kuma fiicna in dibedda lagu xaakoodaa.
Xaakada qofka cudur saabka ah qaba maxaa laga qaadaa?
Maxaa laga doonayaa qofka xaakoonayaa ama diif-sanayaa inuu ku isticmaalo?
Isbitaallada qaaxada sidee baa xaakada loo galaa?
Muxuu yahay cudur lays qaadsiiyo?
Sidee baa cudurrada loo kala qaadi karaa?
Maxay faa’iido dadka u leedahay aqoonta silsiladda faafidda cudurrada lays qaadsiiyo?
Maxaa dhici kara haddii cudur lays qaadsiiyaa meel ka kaco asaan la aqoon cudurkaasi siduu u faafo?
Maxaa looga dan leeyahay kahortegidda cudurrada lays qaadsiiyo?
Wax ka sheeg siyaalaha cudurrada looga hortego?
Maxaa ka mid ah cudurrada aan weli daawadoodii la helin oo tallaal keli ah wax looga qaban karo?
Sheeg faa’idooyinka neecawdu qofka caafimaaadkiisa u leedahay?
Muxuu yahay shayga lagama maarmaanka ah oo neecawda aan neefsanaynno ku jiraa?
Maxay tahay qorraxdu?
Faa’iidooyinka qorraxdu caafimaadka u leedahay saddex ka mid ah sheeg?
Sidee baa loogu oggolaan karaa in qorraxdu guryana iyo xafiisyada soo gasho?
Haddii saddexdooda laysku dari lahaa waxaa ka soo bixi lahaa cunnada habboon oo la doonayo in qofku helo, si uu ugu noolaado nolol wanaagsan iyo caafimaad. Marka waa inay cunnada la cunayo ku wada jiraan caysh (badar, bariid, baasto, rooti, digir, iyo wixi lamid ah.), dhaayin (hilib, caano, kalluun, iyo wixi lamid ah), dufan (subag, saliid, baruur iyo wixi lamid ah).
Maxaa la doonayaa inay ku wada jiraan cunnada habboon?
Carruurta kobciddeeda maxaa lagama maarmaan u ah cunnada mooyee?
Cunnada reer miyigeenna iyo tan beeraleydeennu cunaan ma yihiin kuwo habboon?
Qofku hadduusan saxaroon maxaa gaari kara?
Waa kuwee cudurrada saxarada yareeya iyo kuwa badiyaa?
Waa tee hurdada habbooni?
Markaan halkaan cayaaro ku leennahay uma wadno kuwa iyadoo la fadhiyo lagu madadaasho, sida turubka, jaraha, shaxda iwm., ee waxaan u dan leennahay cayaaraha jimicsiga, sida: kubbadda, orodka, bootinta, teeniska, dabaasha iyo wixi lamid ah.
Maxaa iska beddela qofka cayaaryahanka ah jirkiisa intuu cayaarta ku dhex jiro?
Jirka ma ahee maxaa kaloo ka faa’iidaysta cayaarta?
Waa kuwee cayaaraha jimicsiga oo qofka wax u tari karaa?
Xannaanada dhallaanku waa hawl looga dan leeyahay in lagu daryeelo danaha carruurta yaryar, si ay ugu koraan nolol wanaagsan. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee baa xannaano fiican loo taaran karaa ilmaha. Waxa ugu horreeya oo la fakari karaa waa in cunno la siiyaa; laakiin arrintu ma aha cunnoy cunno ma tahay ee waa inay ahaata cunnada dhallaanka la siinayaa mid habboon xagga tirada iyo xagga noocaba, waafiqi kartana dheef shiidkooda. Hooyooyinka Soomaalida waxaa caado u ah inay ilmahooda ilaa ay 2 ilaa 3 sano ka gaaraan ku quudiyaan caano keli ah ama ha ahaadeen kuwa naaskooda ama kuwo xoolaaha. Waxaa iyana dhacda inay subagga ugu roonaadaan. Hase yeeshee, caanaha iyo subaggu wax kastoo ayan sidooda u xumayn, haddana keligood ma noqon karaan cunno habboon, iyadoo ay weliba dhici karto haddii laga badiyo qiyaastii la rabey inay ilmaha caafimaadkooda wax yeelaan.
Maxay yihiin waxyaalaha lagama maarmaanka u ah koridda wanaagsan ee dhallaanka?